सर्वश्रेष्ठ ब्याक्र्याट वास्तविक पैसा क्यासिनो अनलाइन - UK 2021 ✅
Home » क्यासिनो खेलहरू » ब्याक्र्याट
जब तपाईं वास्तविक पैसाको साथ बकारात खेल्नुहुन्छ
ब्याक्र्याट भनेको के हो?
ब्याक्र्याटको आधारभूत नियमहरू
ब्याक्र्याटको आधारभूत रणनीति
Baccarat अनलाइन खेल्नुहोस्
तपाईलाई सबै अनलाइन ब्याक्र्याटको बारेमा जान्नु आवश्यक छ!
जुवा एक रमाईलो खेल हो जुन प्रायः क्यासिनो-गोयरहरूलाई नैतिक निर्णय लिने कार्य त्याग्न लगाउँछ। भाग्यवस, त्यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन तपाईं जिम्मेवार रहन सक्नुहुन्छ वास्तविक पैसासँग खेल्दा। केहि सूचकहरु विचार गर्न को लागी एक समझदार बजेट बनाउने, एक विजेता पुरस्कार सेट, र sober खेल जबकि।
कुनै पनि अनुभवी जुवा खेलाडीले बजेट स्थापना गर्नुको महत्त्व जान्दछन्। छोटकरीमा, यसले तपाइँ ओभरपेन्ड नगर्ने कुरा निश्चित गर्दछ। गोल सेटिंग जिम्मेवार गेमप्लेको लागि पनि अनुकूल छ। टाढा र टाढा समझदार जुवाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक सोबर खेलिरहेको छ। धेरै धेरै पेय पदार्थहरू चाँडै तपाईंको न्याय बिग्रन्छ र तपाईंको मेमोरी अस्पष्ट बनाउँदछ।
प्रत्यक्ष ब्याक्र्याट क्यासिनो कार्ड-तुलना खेलको संस्करण हो जुन खेलाडीहरूले टाढाबाट भाग लिन्छन् जबकि वास्तविक समयमा डिलरको सबै कार्यहरू देख्दा। खेल मार्फत प्लेयरको स्क्रिनमा कार्ड डिलरको कार्य प्रवाह गर्न इन्टरनेट जडान प्रयोग गरिन्छ। कुराकानी विकल्प प्राय: समावेश गरिन्छ।
प्रत्यक्ष मोड बेकार्याट-पन्तो बान्को, रसायनिक वा बन्कोको विभिन्न संस्करणहरू खेल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। पुन्टो बैन्को, यद्यपि, खेलको सबैभन्दा लोकप्रिय संस्करण हो र प्राय जसो बेककार्टको रूपमा चिनिन्छ। यस संस्करणले खेलाडीहरूलाई उनीहरूसँग डील गरिएको कार्डमा आधारित चालहरू बनाउन बाध्य पार्छ।
ब्याक्र्याट खेलाडीहरूले कार्ड तुलनाको तीन सम्भावित नतिजामा शर्त लगाउन सक्छन् – बैंकर, प्लेयर वा टाई। खेलाडीहरू पहिले आफ्नो बाजी लगाएर सुरु हुन्छ, त्यसपछि डिलरले दुई खेलाडीहरू र ब्याकरको हात समातेर दुईवटा कार्ड गर्दछ। खेलको उद्देश्य भनेको नौ योग वा नजिकको कार्ड योग प्राप्त गर्नु हो।
ऐसको एउटाको मान छ जबकि अनुहार कार्ड र दसाहरूको शून्य मान। यदि कार्डहरूको योग नौ भन्दा पर छ, योगको अन्तिम अंक वास्तविक मान हुन्छ। कुल १ जनाले पाँचको मान र यस्तै अन्य फर्काउँछ।
यदि कुल पाँच भन्दा कम छ भने, तेस्रो तान्न सकिन्छ।
ब्याक्र्याटमा अन्धा बेटिंग समावेश छ, त्यसैले अन्तर्ज्ञान भन्दा धेरै रणनीति त्यहाँ छैन। खेलाडीहरू, तथापि, उनीहरूको जितको ट्र्याक राखेर र ब्या the्कर, खेलाडी वा टाईमा कहिले बाजी लगाउने भनेर जानेर उनीहरू खेल्न जारी राख्न सकिन्छ। मुख्य रणनीति बेटिंग एकाइहरू फरक मा निहित।
जब हराउने धारमा, उत्तम रणनीति भनेको प्रत्येक राउन्डमा एक इकाई द्वारा हिस्सेदारी बढाउनु हो। यसले हराएको पैसा पुन: प्राप्त गर्ने मौका प्रदान गर्दछ जब खेलाडी अन्ततः एक सही कल गर्दछ।
अर्को चाल भनेको एक बान्कीसँग लगातार शर्त लगाउनु हो। यदि प्लेयर जित्दै छ भने बैंकरमा स्विच नगर्नुहोस्।
दुई सिद्धान्तहरू ब्याक्र्याटको उत्पत्ति स्पष्ट पार्ने दाबी गर्दै। एउटा सिद्धान्तले दावी गरेको छ कि यो खेल इटालीमा जन्मेको थियो र फ्रान्समा १ the औं शताब्दीमा लोकप्रिय भयो किनकि यो फ्रान्को-इटालियन युद्धमा काम गरेका सैनिकहरूले खेलेका थिए।
अर्को सिद्धान्तले दावी गर्यो कि खेल १ th औं शताब्दीमा जन्मिएको थियो।
यसको शुरुआती दिनमा, ब्याकार्टको तीन संस्करणहरू पनि त्यति नै लोकप्रिय थिए। खेल विकसित भए पछि, पून्टो बान्को (खेलाडी र बैंकर) आफ्नो खेल सजिलोको कारण बाँकी भन्दा बढी लोकप्रिय भयो।
यो विशेषता के हो जसले यसलाई क्यासिनोमा अनुकूलनको लागि आदर्श बनाउँदछ जहाँ खेलहरू छिटो र सजीलो बुझ्न आवश्यक हुन्छ।
ब्याकार्याट विश्वका अन्य क्षेत्रहरूमा जस्तै उच्च-रोलरहरूसँग लोकप्रिय छ। अझै, साधारण पन्टर्सले यो खेल अनलाइन र भूमि-आधारित प्रतिष्ठानहरूमा प्रस्ताव गर्ने असंख्य क्यासिनोहरू मध्ये कुनैमा पनि खेल्न सक्दछ।
ब्याक्र्याटको सहज प्रकृतिले भर्खरै पान्टर्सको लागि समेत यसलाई एक व्यावहारिक जुवा विकल्प बनाउँदछ।
बेटफेयर र विलियम हिल आउटलेटहरू सबैभन्दा लोकप्रिय ब्याक्र्याटको प्रस्ताव भूमि-आधारित क्यासिनो हुन्। खेल हालको समयमा जेम्स बान्ड द्वारा लोकप्रिय खेल एक चुम्बक जस्तै जुवा खेलाडीहरु लाई आकर्षित गर्दछ। दुई आउटलेटहरू पनि खेल अनलाइन प्रस्ताव गर्दछ।
तपाईंले सधैं बैंकरमा शर्त लगाउनु पर्छ?
बैंक शर्त को लागी नहुनु 45 45. are85% हो। खेलाडी असमानता around 44.2२% को पक्षमा गर्दछ। फरक कुनै अन्य प्रकारको भन्दा अधिक बैंकर जीत योग्यताको लागि पर्याप्त महत्त्वपूर्ण छ। Baccarat राम्रो बनाउने प्लेयर को लाभ को लागी यो सिर्जना गर्दछ।
के कार्ड गणनाले लाइभ ब्याक्रेटमा काम गर्दछ?
ब्याक्र्याटले ब्ल्याकजेकसँग धेरै समानताहरू साझा गर्दछ। ती दुबै क्या कार्ड व्यवहार गरिन्छ भनेर पूर्वानुमानको कार्यमा निर्मित छन्। कार्ड गणनाले यो प्रत्याशामा खेलाडीहरूलाई लागू रणनीतिमा अनुमति दिन्छ। यदि खेलाडीहरू ट्र्याक राख्न सक्षम छन् के कार्डहरू सम्झौता भइसक्यो भने तिनीहरूसँग के कार्डहरू छोडियो भन्ने बारे तिनीहरूसँग राम्रो विचार छ। यसले कार्ड गणनालाई धेरै लाभदायक बनाउँदछ जब बकार्याट खेल्दा प्रयोग गर्नका लागि।
लाइभ डिलर ब्याक्र्याटमा सर्वश्रेष्ठ शर्तहरू के हुन्?
ब्याक्र्याटमा क्यासिनोमा कुनै पनि टेबल खेलको न्यूनतम घर समस्याहरू हुन्छन्। एक बैंकर शर्त एक घर किनारा छ 1.06%। यसले खेलाडीहरूलाई ठूलो फाइदा प्रदान गर्दछ। यो जुनसुकै जूवा खेलाडीले बनाउन सक्ने सबैभन्दा सुरक्षित बेट्स हो। प्लेयर बेट्स को लागी घरको किनारा १.२।% छ, र टाईको १ 14..36% को ठूलो किनारा छ।
ब्याक्र्याट आयोग भनेको के हो?
ब्याक्र्याट आयोग एक सन्तुलन कार्य हो जुन ठूलो-भन्दा सामान्य खेलाडीको लाभ ब्याकराट प्रस्तुत गर्दछ। आयोगले सबै बैंकर शर्त जीतमा%% कर चार्ज गर्दछ। अतिरिक्त चार्ज बावजुद बैंकर बेट्स बनाउनको लागि सबैभन्दा आकर्षक शर्त नै रहन्छ।
एक अनलाइन लाइभ ब्याक्र्याट खेलमा कति डेकहरू प्रयोग हुन्छन्?
परम्परागत ब्याक्र्याट खेलहरूले 52२ कार्डहरू सहित आठ डेकको सेटअप प्रयोग गर्दछ। अनलाइन क्यासिनोहरूले फरक नम्बरको प्रयोग गरी बाकार्टको गर्व गर्दछ। यी भिन्नताहरूले सामान्यतया औपचारिक नियमहरूमा मोहर प्रदान गर्दछ तर ब्याक्र्याटको सार राख्दछ।
म कसरी लाइभ ब्याक्र्याट तालिकामा शर्त लगाउँछु?
ब्याकार्टसँग ब्याजरहरू राख्नका लागि तीन उपलब्ध विकल्पहरू छन्। खेलाडीहरूले बैंकर, खेलाडी वा टाईमा शर्त लगाउन छान्न सक्छन्। वस्तु कुन हातले जित्नेछ भनेर भविष्यवाणी गर्नु हो। भौतिक बेकार्याट टेबलमा यो तीन सर्कलले प्रस्तुत गर्दछ। प्रत्यक्ष ब्याक्र्याटको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। खेलाडीहरूले आफ्नो शर्त सम्बन्धित सर्कलमा राख्छन् र डीलरले हातहरू डिल गर्दछ। यदि खेलाडीले सही भविष्यवाणी गरे भने तिनीहरूले बाजी जित्न सक्छन्।
एक Live Baccarat तालिका मा न्यूनतम शर्त के हो?
परम्परागत बकरात तालिकाको लागि न्यूनतम शर्त generally १ को आसपास हुन्छ। VIP तालिकाहरूलाई फरक न्यूनतम आवश्यक पर्दछ किनकि तिनीहरू उच्च रोलरहरू द्वारा आबादित छन्। न्यूनतम वीआईपी शर्त anywhere or वा £ १० को बिच कतै हुन सक्छ।
ब्याक्र्याट अनलाइन खेल्दा के के फाइदाहरू छन्?
अनलाइन जुवाको यसको आभासी प्रकृति द्वारा प्रदान गरिएको विशिष्ट फाइदाहरू छन्। यो ज्यादै उपयुक्त छ, कुनै पनि समयमा खेल्न सकिन्छ, र सामान्यतया प्रोत्साहन शारीरिक क्यासिनो छैन। बेकार्याट खेलाडीको विशिष्ट अवस्थामा खेलको उनीहरूको हालको बुझाइ समायोजित गर्न कौशल स्तर समायोजित गर्न सक्दछ।
बेकर्याट किन चीनमा लोकप्रिय छ?
ब्याकार्ट दुई लोकप्रिय अन्य कारकहरूमा यसको लोकप्रियता छ। यो चीनमा प्रस्तुत गरिएको पहिलो टेबल खेलहरू मध्ये एक हो, र यसको गेमप्लेले परम्परागत चिनियाँ अन्धविश्वासको प्रशंसा गर्दछ। चिनियाँ संस्कृतिले आठ नम्बर लाई भाग्यशाली मान्दछ, र आठ ब्याक्र्याटको आधारभूत आधारभूत मा। आठ परम्परागत खेलको लागि प्रयोग हुने डेकहरूको संख्या हो, र आठ कार्ड पनि हो जुन एक द्रुत जीतको सौदा गर्दछ।
म कसरी बक्र्यारेट अनलाइन खेल्न सक्छु?
Baccarat लगभग अनलाइन जुवा साइटहरुबाट उपलब्ध छ। खेलाडीहरूले खेलमा भाग लिनको लागि तिनीहरू प्रस्ताव गर्ने साइटको सदस्य हुनुपर्दछ। तिनीहरूले न्यूनतम निक्षेपको पनि दर्ता आवश्यकता पूरा गर्नुपर्नेछ। एक पटक खाता प्रत्यक्ष छ र तिनीहरू पैसा दिन्छन्, खेलाडीहरू आफूले चाहेको कुनै पनि खेल खेल्न सक्छन्।
म कसरी लाइभ ब्याक्र्याटमा जित्न सक्छु?
एक ब्याकार्ट कुपन जीत सही कसको विजेता हात पकड को आशा गरेर पूरा गरीन्छ। प्राय जसो यो या त बैer्कर वा खेलाडी हो। टाई खेलहरू धेरै अनौंठो हुन्छन्। धेरै जसो खेलाडीको छनोट अनुमानमा पर्छ। रणनीति अधिक सफलता प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जे होस्। खेलाडीहरूले तथ्या .्कहरू अनुसरण गर्न सक्दछन्, अनौंठाहरूमा बाजी लगाउन सक्छन्, र चिप मानहरू एक भन्दा बढि विकल्पमा असाइन गर्न सकिन्छ।
के Live Baccarat खेल्नु सुरक्षित छ?
लाइभ ब्याकार्ट सुरक्षित रूपमा खेल्नु भनेको खेलमा सम्मानित अनलाइन क्यासिनो छनौट गर्ने कुरा हो। जब सम्म भर्चुअल क्यासिनो विश्वसनीय र इमान्दार छ, यसमा खेलेको कुनै पनि खेल सुरक्षित जोखिम हुनेछ।
वास्तविक क्यासिनोमा प्ले गरिएको प्रत्यक्ष ब्याक्र्याट र ब्याकार्ट बीच के भिन्नता छ?
प्रत्यक्ष ब्याकार्टले सुविधा र प्रोत्साहनहरू बोक्दछ जुन सबै भर्चुअल खेलहरूले बोक्दछ। यो कहिँ पनि खेल्न सकिन्छ, कुनै पनि समय, र लाभदायक वफादारी बोनसको साथ छ। शारीरिक ब्याक्र्याट यो राखिएको क्यासिनोमा सीमित छ। लाइभ ब्याकार्टले जान्न चाहने गेमरहरू खेल डाटा प्रदान गर्दछ जुन उनीहरू कार्यवाही रणनीतिहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्।
प्रत्यक्ष ब्याक्र्याट र आरएनजी ब्याक्र्याट बीचको भिन्नता के हो?
RNG अनियमित संख्या उत्पादन को रूप हो र एक कार्य कम्प्यूटर प्रोग्राम हो। गेमप्ले वास्तविक ब्याक्र्याट सिमुलेट गर्दछ तर पूरै मेकानिकल हो। प्रत्यक्ष डीलर बेकर्ट एक मानव क्यासिनो डीलरसँग खेल्दछ। यो उपकरण समायोजित गर्न प्रवाहित र वास्तविक समय मा खेलाइन्छ। यो एक धेरै प्रामाणिक भावना भालू किनभने यो मूलत: Baccarat को एक प्रत्यक्ष खेल हो। प्रत्यक्ष डीलर खेलहरूले बहु खेलाडीहरू पनि समायोजन गर्न सक्दछन्।
म कसरी लाइभ ब्याक्रेट खेल्छु?
ब्याक्र्याट कुपन ब्याजिंग अवधिको साथ सुरू हुन्छ। खेलाडीहरूले उनीहरूको चिप मान आफ्नो छनौट सर्कलमा असाइन गर्छन्। यो तीन सम्बन्धित छनौट मध्ये एक क्लिक गरेर गर्न सकिन्छ। यसपछि डिलर दुबै हातहरू डील गर्दछ र कार्ड मानहरू लामो हुन्छन्। विजेता हात नौ नम्बरको सब भन्दा नजिक छ। यो कुपन कसको हातले खेल जित्छ भनेर सही अनुमान लगाएर जितिएको छ।